Apple inonyorera patent inoenderana nebhatiri dhizaini | Ndinobva mac
Izvi hapana mubvunzo kuti ndeimwe yenyaya dzakakosha kwazvo pane zvazvino nharembozha uye Apple Macs. Mushure mekutanga iyo MacBook Retina Iine bhatiri chairo rekusarudza uye rinoshanda muchimiro che "chinzvimbo" chimwe pamusoro pechimwe, vakomana vanobva kuCupertino vanoenderera nekutenda mukuvandudzika kweramangwana.
Iye zvino iyi patent nyowani inoratidza kuti basa mune izvi harisi kumira uye ivo vari kuramba vachiedza kuvandudza dhizaini yemabhatiri ku ipa mhinduro chaidzo dzekuzvitonga kuzvigadzirwa zvazvino.
Kwenguva yakareba, mabhatiri haana kumbofambira mberi padanho rakaenzana nezvimwe zvikamu zveMacBook, iPhone kana iPad, izvi zviri pachena. Zvakare mushanduro yapfuura ye2016 MacBook Pro ine Kubata Bar, kumwe kwekushoropodzwa kukuru kwevashandisi ndiko kunyatso kuzvimiririra kwemabhatiri aya. Naizvozvo, kubva kuApple uye nemamwe makambani eetekinoroji Vanoenderera mberi vachiita zvese zvavanogona kuti vavandudze iyi "Achilles tendon" inova bhatiri.
Iwo 12-inch MacBook Retina mabhatiri aive achisvetuka chaiko mune ino pfungwa (kuwedzera kune ino shanda Hardware iyo zvikwata zvinokwira) uye ndeyekuti kana tikatarisa saizi uye ukobvu hweMac iyi, zvinoita kunge zvisingaite kuti bhatiri iri rakakwana simba kumira nguva yese iyoyo yebasa. Mune ino kesi patent nyowani inoratidza imwe nhanho mune ichi chakakosha chikamu, mabhatiri akavakirwa pa "materu" iyo inomonera kumusoro kuti itore nzvimbo shoma, kuchinjika kune chishandiso uye ichipa inonakidza kuzvitonga.
Semazuva ese mune izvi patent zvinotarisirwa kuti Apple ramba uchishanda pairi uye ndakapedzisira ndaishandisa pamakomputa avo, asi iri imwe nyaya. Isu hatife takamboona chimwe chinhu chakafanana neMacBook Retina pane iyo iPhone, iPad kana Apple Watch, asi patent yatove kunyoreswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inonyorera patent inoenderana nebhatiri dhizaini